जन्मदिन विशेष: पुर्व प्रेमी रणवीरसंग 'संजु' मा काम नगर्नुको राज गरिन् खुलासा!
जन्मदिन विशेष: पुर्व प्रेमी रणवीरसंग ‘संजु’ मा काम नगर्नुको राज गरिन् खुलासा!
असार ३२, २०७५ बिगुल न्यूज- SG
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफ आज आफ्नो ३५ औ बर्थडे सेलीब्रेट गर्दैछिन्। कट्रिनाले न्युयोर्कको केहि तस्विर इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी छिन्। कट्रिनाको बर्थडेको अवसरमा रणवीरको सुपरहिट फिल्म ‘संजु’ बाट उनको कनेक्शनको राज खोलेका छन्।
खबरअनुसार ‘संजु’ मा मान्यताको रोलको लागि राजकुमा हिरानीले सबैभन्दा पहिले कट्रिनालाई प्रस्ताव गरेका थिए। संजय दत्त र रणवीर कपुर पनि चाहन्थे कि कट्रिनाले नै मान्यताको रोल निभाओस तर फिल्मको सुटिंगभन्दा पहिले नै कट्रिना र रणवीरको ब्रेकअप भएको थियो। त्यसैले कट्रिनाले रणवीरको साथ काम गर्न अस्विकार गरेकी थिइन्। यसपछि यो रोल दिया मिर्जालाई मिलेको थियो। यदी कट्रिनाले यस फिल्ममा काम गरेको भए उनको करियर थप उचाइमा पुग्थ्यो। कट्रिना यस वर्ष शाहरुख खानको साथ जिरो र आमिर खानको साथ ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ बाट बलिउडमा धमाका मच्चाउदै छिन्। बताईएअनुसार कट्रिनालाई रणवीर कपुरकी गर्लफ्रेन्ड आलिया भट्टले पनि इन्स्टाग्राममा अकाउन्टमार्फत जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छिन्।
प्रकाशित : सोमबार, असार ३२, २०७५१३:११
अजयकी यी अभिनेत्रीले यसकारण बेच्नुपर्यो आफ्नै घर, फिल्म फ्लप भएपछि गरिन् बिहे!